GOVERNEMANTA: Mitohy ny asa fanavaozana na dia ankatoky ny faran’ny taona aza – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 3:04
Tany Antsirabe no natao ny fihaonana.
Accueil/Politika/GOVERNEMANTA: Mitohy ny asa fanavaozana na dia ankatoky ny faran’ny taona aza
Notanterahana tao amin’ny Renivohitry ny Faritra Vakinankaratra ny Filankevitry ny Governemanta, notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny Sabotsy teo. Nambarany nandritra izany fa hitohy hatrany ireo asa fanaovazana ataon’ny Fanjakana, na dia efa ankatoky ny faran’ny taona aza isika izao. Isany nambarany ny fanaovana ny rafitra eo anivon’ny Tafika malagasy izay tsy maintsy hirosoana.
Lucien R. 21 décembre 2020
Ho tohin’ny fivoriana fanaon’ny mambran’ny Governemanta isan-kerinandro ao amin’ny Lapan’I Mahazoarivo, notanterahana tao Antsirabe ny Filankevitry ny governemanta, ny Sabotsy teo. Araka izany, ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, no nitarika ny fihaonana ka nodinihina nandritra izany ireo raharaham-pirenena tsy afa-miandry. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nambaran’ny Praiminisitra “fa na dia amin’izao ankatoky ny faran’ny taona izao aza dia mbola maro ireo fanavaozana maro isan-karazany tsy maintsy atao eto amin’ny tany sy ny Fanjakana, ary ilàna fandinihana sy famakafakana lalina ary fotoana ka izay no anton’izao fivoriana androany Asabotsy eto amin’ny Akademia miaramila izao”.
Tafiditra ao anatin’ireo fanaovana kasain’ny Governemanta ho tanterahina ny fanavaozana ny rafitra eo anivon’ny Tafika. Tanjona ny mba hisian’ny fandriampahalemana izay laharam-pahamehana tokoa, hoy ny fanazavana. Hisy, noho izany, ny fametrahana ny “Etat Major” telo manampy ny “Etat Major des armées”. Tsiahivina fa vao tsy ela ihany koa no napetraka ny « Zone de Défense et de Sécurité » ary ireo rafitra isam-paritra na ny « délégation militaire régionale ». Manomboka ihany koa ny fametrahana ireo « bataillons » maromaro, ka tsy maintsy mila fandinihana izany.
Fankatoavana rijan-tenin’ny didy amam-pitsipika
Ankoatra ireo, maro ireo rijan-tenin’ny didy amam-pitsipika nankatoavin’ny Filankevitry ny Governemanta ny Sabotsy teo. Izany hoe, mitohy hatrany ny asa. Saika nahazo fankatoavana daholo tokoa mantsy ireo didim-panjakana mikasikana tetikasa isaky ny Minisitera, na koa fanovana rafitra. Tetsy ankilany, nanamarika iny Filankevitry ny Governemanta farany teo iny, ny fandinihana ny lalàna mifehy ny “jeux d’argent” na ny “jeux du hasard”, izay efa tamin’ny taona 1971 no ampiasaina amin’izao, kanefa efa tsapa fa tsy mifanaraka intsony amin’ny toe-java-misy izany. “Efa miha mivoatra tokoa izy ireny, raha tsy ilaza afa-tsy ny amin’ny sehatry ny internet. Izany indrindra no mibaiko antsika tsy maintsy hanavao ny lalàna rehetra mifehy ny kilalao rehetra izay mampiasa vola, kanefa atao mifanaraka sy manaja ny soatoavina Malagasy », hoy ny Praiminisitra.
FILOHAN’NY HCDDED: “Misy ny demokrasia matoa mbola afaka miteny ny « Miara-Manonja »”
FILOHAN’NY CENI : “Voahaja tanteraka ny didy aman-dalàna momba ny fanendrena anay”